गाईजात्रा विशेष : सीधा प्रश्‍न प्रधानमन्त्रीसँग – SaipalNews.com
काठमाडौँ १९ साउन । भोलि मंगलबार गाईजात्रा । यसपालि कोभिड महामारीका कारण गाईजात्रामा सँधै हुनेगरेका हाँस्यव्यङ्ग्यका कार्यक्रमहरु हुन सकेनन् । सँधै यस्ता कार्यक्रम गरेर राजनीति र समाजका विकृतिलाई व्यङ्ग्य वाण हान्दै दर्शक हँसाउने कलाकारका हात भने यस वर्ष पनि चिलाए । कसैले भर्चुअल गाईजात्रा गरे भने कोही कलम समाएर लेख्न कस्सिए ।
कार्यक्रम गर्न नपाएका जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ले यसपालि व्यङ्ग्य लेखमार्फत् त्यो कमि पूरा गर्न खोजेका छन् । त्यो पनि, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामार्फत् । यो अन्तर्वार्ताका प्रश्न त जितुका हुन् नै, उत्तर पनि उनकै हुन् ।
प्रश्नः प्रधानमन्त्रीज्यू, कस्तो छ हजुरलाई, सन्चो छ ?
प्रमः सन्चो छ । जडिबुटी कम्पनीले निकालिरहेको छ । सन्चो राम्रै बिक्री पनि भइरहेको छ ।
प्रश्नः हजुरको स्वास्थ्य कस्तो छ ?
प्रमः पार्टी र सरकार चलाउनका लागि पर्याप्त छ ।
प्रश्नः पार्टीभित्रको किचलो कहाँ पुग्यो ?
प्रमः अहिले भैसेंपाटीसम्म पुग्या छ ।
प्रश्नः एक्कासी बामदेवजीकोमा किन जानुभाको ?
प्रमः बामदेवकाँ नगएर रामदेवका जाने त ?
प्रश्नः बामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको कुरा साँचो हो ?
प्रमः साँचो होइन, ताल्चा हो । साँचोले खुल्न नि सक्छ, नखुल्न नि सक्छ ।
प्रश्नः अकस्मात यस्तो कुरा किन गर्नुभएको ?
प्रमः जसलाई जे कुरा गर्दा खुसी हुन्छ त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्नी अहिलेको समयको माग हो ।
प्रश्नः पार्टीमा सहमति कहिले हुन्छ ?
प्रमः यो सहमति भनेको लुडोको गोटीजस्तै हो । पोट आउन नि सक्छ, नआउन पनि सक्छ ।
प्रश्नः पार्टीमा तपाईंको राजीनामाको कुरा पनि उठिराको छ नि ?
प्रमः धेरै उठिराख्यो भने निद्रा नपुगेर विभिन्न रोग लाग्न पनि सक्छ । त्यसैले उठाउनेहरुले सुताउनु पनि होला भन्न चाहन्छु ।
प्रश्नः दुई पदमध्ये एउटा छोड्नु पर्छ भन्छन् नि ?
प्रमः मेसीलाई तैंले एक गोलमात्रै हान्नु पर्छ भनेर मान्छ र ?
प्रश्नः स्थायी कमिटीको बैठक किन बस्न सकिरहेको छैन ?
प्रमः स्थायीको मतलब के हो ? घरीघरी बसिरहनलाई अस्थायी कमिटी हो र ? हामी हाम्रो पार्टीको कमिटीलाई अस्थायी बनाउन चाहदैनौं । यो स्थायी छ, स्थायी नै रहिरन्छ ।
प्रश्नः पाटी फुट्न पनि सक्छ भन्छन् नि ?
प्रम : पाटीमा लेखेर पढ्ने जमाना एक समयमा थियो । त्यो बेलामा पाटी चर्किन्छ कि फुट्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो । अब अहिले आइप्याड र ल्यापटपमा लेख्ने, पढ्ने युगमा पाटी कसरी फुट्छ ?
प्रश्नः मन्त्रीहरुले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो पनि आउने गर्छ नि ?
प्रमः सहयोग गर्नुभाछ । मन्त्रिमण्डलको बैठकमा आउनु भएकै छ । सरकारले दिएको सुविधा स्वीकार गर्नुभएकै छ ।
प्रश्नः स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको के छ ?
प्रमः स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू स्वस्थ हुनुहुन्छ ।
प्रश्नः भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छन् नि ?
प्रमः चारबाट पाँच पुग्यो र ? हिजो पनि भ्रष्टाचार नै थियो, अहिले पनि चार नै छ । अहिले चै भ्रष्ट पाँच भएको छ र ? कि हिजो तीन भएर अहिले चार भएको भएपो बढ्यो भन्नु !
प्रश्नः स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्छन् नि ?
प्रमः खरिदमा भए पनि बिक्रीमा त भएको छैन नि !
प्रश्नः प्रकृया गलत भयो, आवश्यक मापदण्ड पूरा भएन भन्नी कुरा छ नि ?
प्रमः मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । सोसल डिस्टेन्स कायम गर्दै मास्क लगाएर, सेनिटाइजर लगाएको हुनुपर्छ ।
प्रश्नः विभिन्न अपराधका घटनाहरु घटिरहेका छन् नि ?
प्रमः घटिरहेका छन् । घट्नु नै राम्रो हो । बढी छैन । घटी नै छ नि !
प्रश्नः पछिल्लो समयको अदालतका निर्णयलाई कसरी हेर्नुभाछ ?
प्रम : मैले हेर्न पाएको छैन । त्यतिखेर टिभी बन्द भएको रहेछ । अब युट्युबमा आएछ भने हेरौंला ।
प्रश्नः हत्या अभियोग लगोकालाई आठै वर्षमा छुटाइयो भनेर भन्छन् नि ?
प्रमः हाम्रो देशको अपराध र कोरोना भाइरस उस्तै हो । कुनबेला नेगेटिभ आउँछ, कुन बेला पोजेटिभ आउँछ भन्नी थाहा हुँदैन । कोरोनाको रिर्पोट आठ दिनपछि, दस दिनपछि पोजेटिभ आउँछ । कोइरालाको रिपोर्ट आठ वर्षपछि पोजेटिभ आयो, के भो त ?
प्रश्नः गाइजात्राको अवसरमा सरकार र नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गर्ने हाँस्यकलाकारहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
प्रम: व्यङ्ग्य गर्नलाई ढंग चाहिन्छ । व्यङ्ग्य भनेको सनाई जस्तै हो । जान्नीले भाका टिपेर बजाइहाल्छ, सुन्दानी रमाइलो लाग्छ । नजान्नीले प्याँ प्याँ र ट्या ट्या गरेर भाका खोज्दैमा बिहे सकिन्छ । त्यसैले भाका नजान्नीले ट्या ट्या एकोहोरो सनाइ नबजाएकै राम्रो । सनाइले भाका बिगार्ने बित्तिकै दमाहा, ट्याम्के र झ्याम्टाको पनि ताल बिग्रन्छ ।
प्रश्न : हाल कलाकारहरु त बेरोजगार भएका छन् नि?
प्रम: का छन् बेरोजगार ? फेसबुकले, टिकटकले, के जाति ग्रामले रोजगारी देको छ त । सबैलाई व्यस्त देख्छु । सामाजिक सन्जालभरी बोलेर भ्याई न भ्याई छ । अनलाइनमा कलाकारहरुकै लाइन छ । ऋषि धमलाकामा नि कलाकारै देखिन्छ । खै कुचाहिँ कलाकारले त १० करोड मागे रे भन्ने पनि सुनिन्छ । अनि यस्ता करोडौंका माग गर्ने, कुरा गर्ने कलाकारहरु कसरी बेरोजगार भए ?
प्रश्नः सिनेमा हल त खुलेका छैनन् नि । विचरा कतिका फिल्म नै चल्न पाएनन् ?
प्रमः त्यही फिलिम चल्न नपाएर त आ–आफैं चलिराख्या छन् नि १ कलाकारका अभिनय, द्वन्द्व, रुवाई, हँसाई सबै मोबाइल मोबाइलमा, टिभी र ल्यापटपमा आएपछि हल किन चाहियो ?
प्रश्न : बेसारका कुरालाई त धेरैले गीत गाए नि ? यसमा कस्तो लाग्यो ?
प्रमः सस्तो लाग्यो । दया पनि लाग्यो । धन्न मैले बेसारको कुरा गरिदिएछु र तिजका गीत गाउन पाएछन् । मैले त्यति नभनेको भए त यसपालिको तिज ठण्डाराम हुनेरछ ।
प्रश्नः अबचाहिँ अन्त्यमा एउटा प्रश्न । यदी तपाईंले पार्टी अध्यक्ष छोड्नु भयो भने भावी अध्यक्ष को बन्न सक्लान् ?
प्रमः नेकपाको अध्यक्ष बन्नी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लबको अध्यक्ष बनेकोजस्तो हो र रु एउटा सिटमा बस्यो ‘आगो आगो’ भन्नलाई ?
समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
प्रमः मैले समय दिएको हैन । तपाईंले लिएको हो । दोस्रो ऋषि धमला बन्ने प्रयत्न नगर्नु । साभार कान्तिपुरबाट
दुबईमा अलपत्र परेका दुई सय ६२ नेपाली काठमाडौं आइपुगे
थपिए ९ सय ८० संक्रमित, थप ९ को मृत्यु
राष्ट्रपतिको चासोस् वामदेवलाई भनिन्-पार्टी विभाजन रोक्न भूमिका खेलिदिनुुस्